Maitiro ekumaka zvikamu zvekudzidzisa paApple Watch | Ndinobva mac
Iyi ndeimwe yesarudzo dzatinowana neApple Watch uye kuti vazhinji venyu vangave musingazive nezvazvo. Izvo ndezve mukana wekumaka nezvikamu zvikamu zvekudzidzira zvinoitwa muvhurika yemhepo mujaho panzira mune yakamira yekudzidzira bhasikoro kana zvakafanana.
Iyi sarudzo inosanganisira maka pamakumbo ese kana chinhambwe chakafambwa panguva yechirongwa chekudzidzisa, kupatsanura chikamu muzvikamu zvitatu zvemaminitsi gumi. Tinogona kuita izvi panguva imwecheteyo yatiri kuita iyo kudzidziswa kubva kuApple Watch yedu uye nhasi tichaona maitirwo azvo.
Iri ibasa rakareruka kuita asi iwe unogona kunge usiri kuzviziva uye isu tinofanirwa kuziva kuti hazvisi zvakajairwa kune vazhinji vashandisi kuita kudzidziswa nezvikamu. Kana iwe ikozvino uchida kunyoresa urwu rudzi rwekudzidziswa nechidimbu (pamakumbo kana zvakafanana) tinogona kukuudza kuti zviri nyore senge tevera nhanho idzi:
Paunoita yakazara lap, ingo peta-penya iyo Apple Watch skrini
Chikamu chidimbu chichaonekwa uye voila, hatifanirwe kumira chero nguva
Isu tatova nechikwata chakanyoreswa. Isu tinodzokorora iyo yakapetwa kaviri kutendeuka yega yega
Kuti utarise zvikamu zvese zvakachengetwa kana tangopedza kudzidziswa.
Isu tinopinda mu iPhone uye tinovhura iyo Yekushandisa app
Isu tinobata iyo Yekudzidzisa tebhu
Tinodzvanya pakudzidziswa uye isu tinodongorera pasi
Nekuda kwekuvharika kwechidzitiro pakushambira, hatigone kumaka zvikamu mune zverudzi urwu rwekudzidzisa. Asi mukudzidzira dziva rekushambira, zvikamu zvinomakwa otomatiki pese paunozorora kwemasekonzi gumi kana kupfuura. Maitiro otomatiki anoonekwa muchidimbu chekudzidzisa, muapp yekuita yeiyo iPhone uye tinogona kuvabvunza pese patinoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekumaka ekudzidzisa zvikamu paApple Watch
Iyo sisitimu haina zvachose inoshanda uye iri kure nekururama, ndakayedza iko mukudzidziswa kwangu (mitambo) uye pandinofanira kuita akateedzana hapana chakafanana negarmin uye bhatani repanyama. Ipa kaviri pachiratidziro kunze kwekusanzwisisika, huwandu hwekushanda hwaunowana i40% zvakanyanya ... Ndinovimba kuti mune ramangwana rimwe remabhatani anogona kupihwa mukana wekungova nemukana wesarudzo. Ini zvakare ndinosuwa yekuverengera sarudzo uye kumisikidzwa kwemascreen kuti ungoona iyo lap nguva yauri kuita kuti uve neashoma esarudzo mune kudzidziswa.
Wachi yeapuro haina kukurudzirwa zvachose kuti udzidzise uye uite zvakateedzana, kungoita zvikamu zvinoramba zvisina kumbomira
Mangwanani akanaka Jon,
Zvakanaka, tinotenda chirevo chako nezvazvo asi kune vashandisi vari kushandisa sisitimu ino kuverenga laps uye inovashandira. Zviripachena iyo Apple Watch haisi Garmin, Polar kana Suunto, asi kune iyi mhando yemabasa zvinoita sekunge inogona kushanda chaizvo.
Zvisinei, tinotenda mupiro wako unonakidza pane iyi nyaya, kwaziso
Platoon, yekugadzira mimhanzi kambani, ikozvino yave yeApple